Oke ikuku emebie ụlọ otu puku na Zamfara | odumblog
Oke ikuku emebie ụlọ otu puku na Zamfara
posted on Jun. 21, 2019 at 6:54 am
Ụlọ karịrị otu puku abụrụla ihe lara n’iyi maka oke ifufe fere na Bugundu nke dị na Zamfara Steeti. Onye wetara ozi a bụ onye omeiwu na-anọchịte ebe ahụ nke aha ya bụ Alhaji Nasiru Lawal. Ndi News Agency of Nigeria kwuru na ihe mberede a mere n’abalị Sọnde bụ ụbọchị iri na isii nke ọnwa Juun, 2019.
Lawal bụ onye kpọrọ ndi nta akụkọ n’ụbọchị Monde, iri na asaa nke ọnwa Juun kwuru na ahụtụbeghi ụdị ihe a kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ. O kwukwara na ha ga-aga ileta ndi ihe a metụtara ma depụtakwa mmebi ihe mberede a mebiri.
Ọ bụghi naani ụlọ ka ikuku a mebiri, o mebikwara ihe ndi gunyere ụlọ akwụkwọ, osisi eletriki na ihe ndi ọzọ. Lawal kwuru na a ga-edepụta ihe ndi a ma degara gọọmenti steeti ka o nyere ndi ihe a metụtara aka.
Emir ndi Bungundu bụ Alhaji Hassan Attahiru kelere Allah maka na e nweghi ndi nwụru ebe naani mmadu ole na ole bụ ndi merụrụ ahụ. O dọrọ ndi mmadu aka na nti ka ha na-arụ ụlọ nke ọma maka ndu ndi mmadu. Ọ rịọkwara gọọmentị ka ha bịa nyere ha aka.
Ihedioha achụọ ndi isi lokal gọọmenti n’Imo Steeti
Naijiria anọghị n’ụjọ Ebola: NCDC